Archive du 20190325
Mialy Rabemanantsoa “Afaka miditra an-tsehatra amin` ny raharaham-pirenena ny rehetra”
Resin` ny tsy miankina ny antoko politika hirotsaka solombavambahoaka amin`ny fifidianana ho avy izao.
Madagasikara Very hazo 36.000 ha tao anatin’ny dimy taona
Mihapotika hatrany ny tontolo iainana eto Madagasikara. Raha araka ny fanazavana azo teo anivon’ny ofisim-pirenena misahana ny tontolo iainana na ny ONE dia very hazo 36.000 ha isika teto Madagasikara tao anatin’ny dimy taona izany hoe :
Rasamson Ny Aina “Maika ny fanovana ny toe-tsaina …”
Mbola olana goavana eto amintsika ankehitriny ny fanovana toe-tsaina hahafahana mivoatra. Tafiditra ao anatin’izany ny fanomezana fahefana ny sefom-pokontany izay tsy tokony ho karamaina 20.000 Ar intsony hahafahana mampandroso ny eny ifotony.
Mpianatry ny CEG Antanimena Nampahafantarina ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy
Raha nalaza hatrany taloha fa fanaka malemy ny vehivavy dia nampahafantarina ireo mpianatra eo anivon’ny CEG Antanimena, kilasy fahasivy fa tsy mitombina intsony io fomba fitenena io ankehitriny.
Seranam-piaramanidina Ivato Mpiambina roa maty nianjeran’ny vavahady
Tandrevaka! Mpiambina sivily roa no maty nianjeran’ny varavarana teo akaikin’ny “salon présidentiel”, teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, ny zoma hariva sahabo ho tamin’ny 7 ora tany ho any, noho ny rivotra tanaty orana.
Atletisma Seksiona Antananarivo-renivohitra Fahombiazana tanteraka ny 15 km de Tanà 2019
Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ny famerenan’ny seksion’ny atletisma Antananarivo-Renivohitra ny hazakazaka 15 km de Tanà nanerana ny araben’Antananarivo omaly alahady 24 martsa 2019.
Potiky ny rivo-doza i Mozambika Miantso fanampiana iraisam-pirenena
Mbola hiangarana i Madagasikara raha samy firenena. Nahita faisana i Zimbabwe sy Mozambika taorian` ny fandalovan` ny rivo-doza IDAI farany teo. Raha ny tatitra farany, miisa 259 no namoy ny ainy ary 257 no tsy hita popoka Zimbabwe.
Mora fantatra ny hena hamidy eny an-tsena rehefa tsy vaovao. Efa maimaina mantsy no fijery azy no sady mamoaka fofona koa. Raha araka ny resaka nifanaovana tamina mpivaron-kena iray dia roa andro eo ihany ny hena no azo hamidy raha tsy dia mafana loatra ny andro.
Itaosy Notsindronin’ny vadiny ny antsy ilay tovolahy
Tovolahy iray vao erotrerony no voatsindron’antsy teny Itaosy omaly.Naratra ny tovolahy kanefa raha ny fampitam-baovao farany voaray tamin’ny nanoratana dia tsy misy ahiana ny momba ny ainy.
Fahatongavan’ny vary mora Tsy mbola nampidina ny vidim-bary eny an-tsena aloha
Tsy mbola misy akony amin’ny vidim-bary eny an-tsena ny fahatongavan’ny “vary mora” 16 500 taonina, raha ny filazan’ireo mpivarotra, mpanjinjara sy mpampongady sendra ny mpanao gazetinay.